ikhaya » iindaba » Ukuphakamisa i-Sun Pictures Izitimela kwisizukulwana esilandelayo se-VFX Superstars
Ukuphakamisa i-Sun Pictures Izitimela kwisizukulwana esilandelayo se-VFX Superstars
Iiprogram zesitifiketi se-studio ze-studio ziye zaba yi-springboard kwimisebenzi kwizinto ezibonakalayo.
Adelaide, wase-Australia yaseMzantsi- Ngenxa yokufuna iziphumo zabaculi, umendo wokuya kwi-stade uqala ngokuqhubekayo e-Adelaide, eMzantsi wase-Australia. Ukuphakamisa i-Sun Pictures, esekelwe e-Adelaide, uye waqhayisa umsebenzi wamazwe ngamazwe ekudaleni iziphumo ezibonakalayo kwiifilimu nakwiimiboniso zikamabonwakude kuquka X-Men: Iintsuku zexesha elizayo, Game of Thrones kunye nokuzayo Thor Ragnarok, kodwa libuye libe negama elikhulayo njengendawo yokuqeqesha italente ezayo.
Inkqubo yemfundo ye-RSP, esebenza ngokubambisana neYunivesithi yaseMzantsi-Australia, inika iinkqubo zeziqinisekiso zeemviwo kwizifundo ezahlukeneyo, kwaye iqukumbele irekhodi elimangalisayo lokunceda abafundi bahambe ukusuka kwiklasi ukuya kwimisebenzi yezoshishino. Kwiminyaka emibili edlulileyo, abafundi abangama-22 abaqeqeshe kwi-RSP-apho inkqubo iphela kwi-10 abafundi nge-semester-baye bafumana umsebenzi ohlawulelwayo kwii-studio ezibonakalayo e-Australia nakwezinye iindawo.
"Kuyinto emnandi," u-Anna Hodge, uMphathi wezeMfundo noQeqesho. "Uninzi lwabafundi beza kuthi emva kokuba befumene idiploma yezinga eliphezulu. Kubo, sifana nesikolo sokugqiba. Sibafundisa ubume bezakhono nezenzo. "
Iprogram ye-RSP iyingqayizivele kuba abafundi baqeqesha kwindawo yokujonga i-studio ye-studio kunye nootitshala babo bonke abaqeqeshi bezakhono. Iiklasi zihlelwe njengemveliso yehlabathi kunye nabafundi kulindeleke ukuba bahambelane nemigangatho yemigangatho yemigangatho kunye nokusebenza kakuhle. Iiklasi nazo zinokudala kwaye zinika abaculi abancinci ithuba lokusasaza amaphiko abo kwisikolo sabo esikhethiweyo. Abafundi ababhalise kwiSatifikethi seMatriki kwiComiting and Tracking kunye neSatifikethi seMatriki kwiiDynamic Effects kunye neenkqubo zokukhanyisa ziva nje zenze iqela lokuvelisa ifilimu emfutshane. Yaye yamkelwa kwi-Adelaide Film Festival apho iza kuba nekota yokuqala yehlabathi.
Ezinye iziphumo ezibonakalayo ezizibonayo eziqeshwe ngabafundi be-RSP ziquka iLimi Logic, Cutting Edge, Resin VFX, i-Iloura, i-Gingerbread Man, i-Foundry ne-Apple. I-Studios ixabisa izakhono ezisemgangathweni kunye nokuqeqeshwa komsebenzi okwenziwa ngabaculi abaqeqeshwayo be-RSP, utsho uLincoln Wogan, umvelisi we-VFX kwi-Resin VFX, esandul 'ukuza kulezi zihlunu zesikolo.
"Ukufumana abalungileyo abanobuchule abanobuchule abaye bangena kwiqela kunye nokuhamba komsebenzi uye waba ngumngeni obunzima kumbulelo kwiSatifikethi sokuFundiswa kweSatifikethi seRising Sun kwiComposing and Tracking course," kusho uWogan. "Abagqwesileyo be-RSP banezakhono, baqwalasele ngokubanzi iinkcukacha, baqonde imigaqo yokuhamba kwemisebenzi kwaye bazimisele ukusebenzela. Ngenye yezinto zokuqala esizikhangeleyo xa siqeshisa umntu omncinane. Kukufutshane nesiqinisekiso semgangatho njengoko unokufumana. "
Akumangalisi ukuba inzuzo enkulu ye-talente yiRSP ngokwayo. Abafundi abasandul 'uhlanu bahamba ngokukodwa ukusuka kwigumbi lokufundela ukuya kwiindawo ezifanelekileyo kwaye ngoku kunzima ukukunceda ukwenza izinto ezibonakalayo hollywood busiki. U-Hodge uthi: "Abaqashi bahlala beqhagamshelana nathi nge talente, kodwa ukuba sinokuziqesha thina, into enhle."
Impumelelo iphumelela impumelelo. Izicelo zezabelo ezizayo kwiziqinisekiso zesatifikethi ziyaqhubeka nokuphakama. Abafundi beza kwi-RSP kuzo zonke iindawo zase-Australia. I studio ilindele ukuwamkela abafundi bayo bokuqala bamazwe ngamazwe ngonyaka ozayo.
Ekuphenduleni ukwanda kweemfuno, i-RSP ijonge ukwandisa inkqubo yayo. Uceba ukunikezela ngeeklasi kunye neeyunithi kwi-UNISA yeMedia Arts degree ngonyaka ozayo. "Into esiyilungiselelayo apha iyona ndlela ifanelekileyo xa ithetha nokufunda ngokudibeneyo," kusho uHodge. "Yinkqubo eyingqayizivele kwaye iqinisekisa ukufumaneka kwabasebenzi abaqeqeshwe kakuhle nabanomdla olungele ukungena kwimisebenzi kungekhona e-Australia kuphela, kodwa kwihlabathi lonke."
Izicelo ngoku zivulekileyo kwiFebruwari 19, i-2018 yokudla. Ngolwazi olungakumbi, tyelela: imfundo.rsp.com.au/sunisa/ okanye uqhagamshelane no-Anna Hodge learn@rsp.com.au
KwiRising Sun Pictures (RSP) senza iziphumo ezibonakalayo zobugcisa kwii-studio ezinkulu emhlabeni jikelele. Ukudala imifanekiso evelele yintloko ebusweni bethu. Kwintliziyo yeqela lethu elinetalente, kukho ulwazi oluhlukeneyo kunye nolwazi lwezakhono, ukunika ingundoqo intsebenziswano apho singasebenzisana khona ukuxazulula iingxaki kunye nokubonelela ngeentlobo ezibonakalayo kubaxhasi bethu. Siphumelele iziphumo ezibonakalayo ezimangalisayo ekusebenzeni ngokubonelela ngezisombululo ezintsha zokusebenzela umsebenzi onzima. Sinekhono kunye nedama leetalente ukulinganisela ukuhambelana neemfuno zabaxhasi bethu.
Ifilimu yethu ebanzi iquka iiprojekthi ze-100, kuquka i-Logan, i-X-Men: i-Apocalypse, iMidlalo yeTrone Isikhathi 6, iThe Legend of Tarzan, i-Gods yaseYiputa, i-Pan, i-X-Men: iintsuku zexesha elizayo, i-franchise ye-Hunger Games, i-Harry I-Potter franchise, iGrivity, i-Wolverine, i-Prometheus ne-Great Gatsby.
I-Derby kaRyan Balas iqalisa "TheFoodPornHub.com" - Julayi 19, 2018
RSP uqeqesho ITeknoloji yeTV Iimpawu Zobonakaliso	2017-09-13
Previous: IsiGqeba se-Akhawunti ye-Akhawunti (i-Full-Time) #5183
next: WeNjineli yoMbane
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Ukuphakamisa i-Sun Pictures Trains kwisizukulwana esilandelayo se-VFX Superstars". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/rising-sun-pictures-trains-thext-ener-f-vfx-superstars/. Enkosi.